विश्वकै पहिलो ‘उड्ने कार’ को यूरोपको सडकमा सफल परीक्षण, मूल्य कति ? | विश्वकै पहिलो ‘उड्ने कार’ को यूरोपको सडकमा सफल परीक्षण, मूल्य कति ? |
विश्वकै पहिलो ‘उड्ने कार’ को यूरोपको सडकमा सफल परीक्षण, मूल्य कति ?
उज्यालो प्रतिनिधि १८ कार्तिक २०७७, मंगलवार प्रविधि
एजेन्सी । विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिले नयाँ नयाँ विकास गरिरहेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । कुनै समय मानिसलाई गाडी चढ्नु सपनाको विषय थियो । तर, अहिले धेरैजसोले आफ्नै प्राइभेट सवारी साधन प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा जोड
यसैबीच केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको ‘उड्ने कार’ बजारमा आएको छ । यो कारको विकाससँगै अब ट्राफिक जाम कम हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।
युरोपमा यो कारलाई चलाउन अनुमति समेत दिइएको छ । पर्सनल एयर ल्याण्ड ह्वीकलले निर्माण गरेको यो कार झट्ट हेर्दा सुपरकारजस्तो देखिन्छ । युरोपको रोडमा यसको सफल परीक्षण गरिएको छ । साथै यसलाई सडकमा चलाउन अनुमति दिइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... इन्टरनेटको खपत ह्वात्तै बढ्यो
यो कारको परीक्षण फेब्रुअरी २०२० देखि गरिँदै आएको थियो । उक्त कम्पनीले सन् २०१२ मै यसको प्रोटोटाइप उडाउन सफल भएको थियो । हाललाई उक्त कारको मूल्य ३ लाख ९९ हजार डलर राखिएको जनाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... भारतमा पहिलो 'सामाजिक दूरी' स्कूटर मिसो लञ्च, यस्तो छ मूल्य र फिचर्स